၉၀ နှစ်တုန်းကရွှေးကောက်ပွဲအကြောင်းကိုမကြားချင်တော့ဘူးကွ၊ မကြာချင်ဘူးဆိုတာ အသိအမှတ်မပြူတာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ပြောချင်တာကတော့ စစ်အစိုးရဆွပေးလိုက်တိုင်း အတိုက်အခံအဖွဲ.အစည်းတစ်ချို.ကလဲကပ်ပါးပါးနဲ.နောက်လိုက်နေတော့၊ အမတ်လောင်းအတော်များများက တမလွန်ဘဝသို.ရောက်ကုန်ပြီ၊ လူထုတွေကလဲသေကုန်ပြီ၊ လက်ရှိပကတိအခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီတော့လုပ်ကြည့်စမ်းပါ၊ သူယုတ်မာစစ်အုပ်စုတို.ပြောတဲ့စကားကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးတော့ ကိုယ့်ဘက်ကပယ်ချလိုက်၊တုံ.ပြန်လိုက်လုပ်နေတာကို၊ စစ်အစိုးရကဖျက်လိုက်လို. ၉၀နှစ်ရွှေးကောက်ပွဲ၏ရလဒ်ကပျက်သလား? ကိုယ်ရထားတဲ့လုပ်ပိုင်းခွင်.အာဏာကိုအသက်ဝင်လာအောင်မလုပ်နိုင်သေးလို.ရွှေးကောက်ပွဲရလဒ်ကအလုပ်မဖြစ်သလား?` ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြတော့၊
သတင်း – အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3)
သတင်း – နားဆင်ရန် (MP3)